Shina Perforated Metal Cladding mitazona ny tranobe amin'ny orinasa Weather Damage sy mpamatsy | Boegger
Sarimihetsika metaly metaly ho an'ny fananganana cladding
Ny fametahana vy vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly dia be mpampiasa amin'ny mpanao mari-trano. Izy io dia manambatra ny fiarovana ny fiainanao manokana sy ny asany maro toy ny jiro, rivotra, fitokana-monina, sarin'ny masoandro. Ny tena zava-dehibe dia ny fiarovana ireo tranobe manoloana ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny metaly perforated dia manana fananana azo antoka ary matanjaka amin'ny lanjany, izay manamora ny fananganana trano vaovao sy fanavaozana ireo trano taloha.
Aorian'ny fitsaboana eto an-tany, ny fisehoan'ny fomba maoderina dia hahatonga ny trano tsy manam-paharoa sy mampiavaka kokoa.
Cladding vy vita amin'ny vy vita amin'ny alimo
Ny fitaovana no zava-dehibe indrindra.
Ny fametahana vy vita amin'ny metaly dia tsy maintsy aseho ivelan'ny trano ary mila faritra midadasika, noho izany dia zava-dehibe ny tanjaka ara-materialy sy ny fanoherana ny harafesina. Ary koa ny tahan'ny lanjan'ny tanjaky ny lanja amin'ny fandinihana ireo fahasahiranana amin'ny fananganana sy ny fitoniana amin'ny firafitry ny rafitra.
Ny aliminioma no fitaovana be mpampiasa indrindra.
Fanohitra ny harafesina avo kokoa. Mavesatra maivana kokoa. Fisehoana tsara tarehy rehefa avy nanadio.
Ny vy mifehy ny toetr'andro dia be mpampiasa koa amin'ny faritra ratsy amin'ny toetrandro, satria izy io dia misy ny vokatra tsara indrindra fanoherana ny toetrandro.
Lavaka boribory misy loaka vita amin'ny birao
Tontonana metaly misy volo misy endrika lavaka telozoro ary etona volafotsy.
Ireo karazana lavaka mitafy dia maneho ny lanjan'ireo haingon-trano.
Ho an'ny fomba fohy dia malaza ny lamina loaka namboarina matetika, toy ny boribory sy ny hexagonal.
Ho an'ny fiantraikan'ny fahitana matanjaka, ny endrika sy ny haben'ny lavaka nohaingoana.
Ny faritra malalaka misokatra dia manome rivotra tsara. Ny ankamaroan'ny mpamorona dia misafidy faritra malalaka 35% hifandanjana mihoatra ny lafin-javatra, toy ny jiro, rivotra, fitokana-monina, sarin'ny masoandro ary fiarovana manokana.
Ny fitsaboana ambonin'ny tany dia misy ny vovo-dronono sy ny anodizing.
Ny famonoana vovoka dia manome safidy loko maro handrakofana ny metaly tany am-boalohany, izay afaka manampy amin'ny fanoherana ny harafesina sy harafesina.
Ny anodizing dia afaka mitazona ny famirapiratan'ny metaly raha mandoko ny vy. Matetika izy io dia mihatra amin'ny takelaka aliminioma, izay afaka miaro ny takelaka amin'ny fihenan'ny oxygen sy ny harafesina.
Fitaovana fananganana panneaux perforated panel
Ankoatr'ireo anton-javatra etsy ambony, ny mpamorona dia handinika ihany koa ny fisehon'ireo efijery voaravaka. Afaka manampy amin'ny fikirakirana tsotra ny takelaka toa ny miondrika na mivalona isika.
Ny fametahana metaly metaly perforated dia be mpampiasa amin'ny tetik'asa samihafa, toy ny toeram-piantsonana, gara, fivarotana, hopitaly, tranobe sns.
Previous: Tady maitso vy mesh maitso ho an'ny zavamaniry mananika
Manaraka: Sarimihetsika metaly metaly ho an'ny valindrihana fananganana
Tady vy tsy misy fangarony vy maitso ho an'ny Climbi ...
Metal manitatra ampiharina amin'ireo fanampiana amin'ny tranobe ...